Daawo Video-gan: Waa arin lagu farxo oo Soomaalida Minnesota sameeyen. - Caasimada Online
Home Warar Daawo Video-gan: Waa arin lagu farxo oo Soomaalida Minnesota sameeyen.
Daawo Video-gan: Waa arin lagu farxo oo Soomaalida Minnesota sameeyen.
Magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota waxaa daga Dadyoow badan oo Soomaali ah oo lagu tiro in ay ka mid yihiin Soomaalida Qowmiyadaha ugu badan ee daga Gobolkaasi Minnesota, Daraasaad la sameeyay ayaa lagu sheegay in Soomaalida Gobolkaasi in ay horumar ganacsiyo iyo dhaqaalabo ka sameeyeen Gobalkaasi Minnesota.
Hadaba Warbixin lagu farxo oo Video ah ayaan idiin soo gudbineynaa nala daawo waa wax yaabaha u wanaagsan indhaha iyo dhagaha in aad maqasho Soomaali baa horumar ka sameeyay wadan hebal waana wax lagu farxo xaqiiqdii ee nala wadaag muuqaalka hoose ee Video-ga.
HALKAAN RIIX SI AAD U DAAWATO VIDEO-GA.